ဂျေဂျေလင်း သည် စင်္ကာပူလူမျိုး အဆိုတော်၊ သီချင်းရေးဆရာ၊ ဓာတ်ပြားထုတ်လုပ်သူနှင့် သရုပ်ဆောင် ဖြစ်သည်။ သူ၏ ဂီတဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှုသည် ၂၀၀၃ ခုနှစ် ဂီတခရီးလမ်း ဟူသော အယ်လဘမ်ဖြင့် ပွဲဦးထွက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ လင်းသည် အကောင်းဆုံး မျက်နှာသစ်အနုပညာရှင်ဆု တဆုနှင့် အကောင်းဆုံး တရုတ်ကျားအဆိုရှင်ဆု နှစ်ဆု ပါဝင်သော ရွှေမယ်လိုဒီဆု သုံးဆုကို ရရှိသည်။
တရုတ်မန်ဒရင်စကားကို ပြောတတ်သည့်အပြင်၊ လင်းသည် တိုင်းရင်းဘာသာစကား ဖြစ်သော့ ဟော့ကင်းနှင့် အသံထွက်ပေါင်းစပ်စနစ်ကို သုံးထားသော ကန်တုံဘာသာဖြင့်လည်း သီဆိုပြီး၊ ကန်တုံသီချင်းများကို ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ ထိုင်ဝမ်၌၊ ရွှေမယ်လိုဒီဆုပေးပွဲ၌ အကောင်းဆုံး မျက်နှာသစ်အနုပညာရှင်ဆုကို ပေးအပ်ခြင်းခံရသည်။
သီချင်းစပ် စွမ်းရည် ကောင်းလှသောကြောင့် သူသည် ကျော်ကြားသည်။ နည်းပြဆရာများ ဖြစ်သော ဘီလီကိုးနှင့် ဆန်းကစ်အင်တို့ လက်အောက်၌ လေ့ကျင့်နေသည့် အချိန် အိုးရှင်းလိပ်ပြာ၌ ရှိစဉ်ကပင် အဆိုရှင်များစွာအတွက် သီချင်းများ ရေးပေးခဲ့သည်။ သူရေးပေးခဲ့သမျှ၌ ထိုင်ဝမ်အဆိုတော် အားမေ၏ သတိရ ၊ အားတို၏ လက်လွှတ်ပါ ၊ ဟာလမ်ယွီ၏ နင်ဘာဖြစ်နေတာလဲ ၊ ကော့မစ်ဘွိုင်းဇ်၏ စူပါမင်းနှလုံးသား စသော သီချင်းတို့မှာ လူသိများလှသည်။
စင်္ကာပူတွင်၊ တပ်နီချီတက်ပွဲ၏ စစ်ချီတေး ဖြစ်သော အိမ် ကို ရီမစ်လုပ်ပြီး ဖျော်ဖြေပေးရန် ၂၀၀၄ တွင် အရွေးခံရသည်။ ထိုသီချင်းသည် တပတ်တာအတွင်း ကော်ပီပေါင်း တသန်း ရောင်းချရကာ အာရှတဝန်း အထူး ကျော်ကြား လူကြိုက်များသည်။
ဇူလိုင် ၂၀၀၇ တွင်၊ ၂ နာရီနှင့် မိနစ် ၃၀ အတွင်း စီဒီပေါင်း ၃၀၅၂ ကို ဆိုပြပြီး ဂင်းနစ်စံချိန်ကို ချိုးလိုက်သည်။ သီဆိုနေစဉ်အတွင်း ရေမသောက် ထမင်းမစားရချေ။ စီဒီတချပ်ကို ပျမ်းမျှ ၂.၇ စက္ကန့်ဖြင့် သူသီဆိုခဲ့သည်။
၂၀၁၀ မေလတွင်၊ လင်းသည် အာရှပစိဖိတ် အမေရိကန်အမွေအနှစ်တလ နယ်လှည့် ဖျော်ဖြေပွဲ ၌ ပထမဦးဆုံးအနေနှင့် အမေရိကန်တွင် ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
လင်းသည် Sprite, Durex, Dota2နှင့် Cornetto Royale စသော တံဆိပ်များအတွက် ကြော်ငြာများတွင် ပါဝင်သည်။
သူသည် စင်္ကာပူအတွက် ခရီးသွားသံအမတ်လည်း ဖြစ်သည်။
သူသည် ထိုင်ဝမ်၌ သံအမတ်အနေဖြင့် မူးယစ်ဆေးဝါးဆန့်ကျင်ရေး လှုပ်ရှားမှုတရပ်၌လည်း ပါဝင်ခဲ့သည်။ ထိုလှုပ်ရှားမှုအတွက် အဓိကသီချင်းမှာ Westside ဆိုသော အယ်လဘမ်မှ ဘေဘီဘေဘီရေ သီချင်း ဖြစ်သည်။
၁၄ ဩဂုတ် ၂၀၁၅ တွင် The voice of China season4တရုတ်ပြည်၏အသံ ရာသီ ၄ အစီအစဉ်တွင် ဟာလမ်ယွီအဖွဲ့၌ အကြံပေးလုပ်ရန် အရွေးခံရသည်။
၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၆ ၌၊ ကျန်းအားမေ၊ ရှောင်းကျင့်ထိန်၊ ထျင်ဖုကျိန်း နှင့် ယွီချွင်တို့နှင့် အပြိုင် နည်းပြဆရာများအနက် တဦးအဖြစ် Dream Voice စုံစိရှိုးတွင် ပါဝင်ပူးပေါင်းသည်။. အောက်တိုဘာ ၂၀၁၇ တွင် ထုတ်လွှင့်သော ရှိုး၏ ဒုတိယရာသီ၌ နည်းပြအဖြစ် ဆက်လက် တည်ရှိသည်။.
From M.E. to Myself 2015
She Says 2010
Lost N Found 2011
Music Voyager 2003
No. 89757 2005
Hundred Days 2009
Stories Untold 2013